Ukucoca umoya kunye neNkqubo yokubulala iintsholongwane kumzi mveliso kunye nabenzi | SONGZ
Ukucaciswa komoya wokucoca kunye neeparameter zobugcisa
Ilungele ukubuya kwomoya omnye:
Ukulungele ukuphindaphinda okuphindiweyo komoya:
Iprojekthi engcolisayo Ukuqala kokuxinana kwezinto ezingcolisayo Ikaliweumthamo womoya (m3 / h) Ukusebenza kwe1h inqanaba lokususa (%)
IFomaldehyde (HCHO) 0.96 ~ 1.44mg / m3 ﹥4800 90.4%
Itoluene (C7H8) 1.92 ~ 2.88mg / m3 ﹥4800 91.4%
Itotali yeekhompawundi eziphilayo (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 ﹥4800 92.2%
Izahlula 0.70 ~ 0.85mg / m3 ﹥4800 99.9%
Yintsholongwane Ngokwe-GB 21551.3 ﹥4800 99.9%
Iimeko zovavanyo: iimitha ezili-12 zemoto enkulu yabakhweli, abalandeli abathandathu be-evaporator, ukusebenza kokuhamba komoya okuphezulu, ukujikeleza kwangaphakathi
Ii-ion ezomeleleyo zinesakhono esomeleleyo se-redox, zinokudibanisa kwaye zibole i-formaldehyde, imethane, i-ammonia kunye nezinye iigesi ezinukayo (VOC) kwisithuthi kwi-cabin bon dioxide, amanzi kunye neoksijini. Inqanaba lokususa lifikelela kuma-95% emva kweyure e-1 yokusebenza.
Uvavanyo lokuhlala: Emva kwemizuzu engama-25 yokuhlanjululwa okunzulu, i-PM2.5 yehlisiwe ukusuka kwi-759 μg / m3 (ungcoliseko olunzima lwebakala elithandathu) ukuya kwi-33 μg / m3 (umgangatho womoya wokuqala), kwaye umgangatho womoya wawubaluleke kakhulu ziphuculwe.
1.Kwimo yobukho bobumbano, isixa sokuvelisa i-ozone yi-0.05ppm, engaphantsi kakhulu kunexabiso lokhuseleko le-0.15ppm. Izinga lokucoca lifikelela kuma-99% emva kwemizuzu engama-30 yokusebenza.
2. I-ultraviolet ayinamandla okungena kwaye ayibangeli monakalo emzimbeni womntu xa ingakhanyiswanga ngokuthe ngqo; kukho umaleko we-photocatalyst, umaleko wokucoca ulwelo wegrille kunye nepaneli yomnyango wegrille phakathi kwesibane sokubulala iintsholongwane kunye nekhabhathi yokuthintela ukuvezwa ngokuthe ngqo kubakhweli, Inokusetyenziswa ngokukhuselekileyo.
Uxinzelelo lweozone Umyinge wenzalo kwi-0.05PPM yoxinzelelo Inqanaba lokucoca inzalo kwi-0.1PPM yoxinzelelo
iiyure zokusebenza Imizuzu eli-15 Imizuzu engama-30 Imizuzu eli-15 Imizuzu engama-30
IStaphylococcus aureus 75.1% 86.3% 81.8% 98.2%
Iikholoni zendalo 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
Iimeko zovavanyo: Sebenzisa i-0.05ppm kunye ne-0.1ppm ye-O3 yoxinaniso ukuvavanya ukusebenza kwayo kwenzalo kunye nenqanaba lokucoca inzalo kwisitya se-200L esivaliweyo.
Inkqubo yokucoca umoya kunye nezibonelelo
1. Iitekhnoloji ezine eziphambili
Ukuphuculwa komgangatho womoya
Izinto Ukuqokelelwa kothuli lwe-Electrostatic (PM2.5) Isibane se-UV ionizer Isihluzi seFotocatalyst
Inzalo × √ √ √
Susa i-VOC √ × √ √
2. Itekhnoloji ye-ion photocatalytic polymerization technology, ukuhlala komntu ngomatshini, ukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane:
Itekhnoloji ye-ion eyomeleleyo yobunini, edityaniswe neUVC yeultraviolet, ioksijini esebenzayo, itekhnoloji engeyiyo kunye nefotocatalytic polymerization technology, ngokubanzi kwaye ikhawuleza ibulale intsholongwane kunye neebhaktiriya, kunye nokukhusela ukusasazeka kwesifo. Inqanaba lokucoca inzalo ngama-99.9%, kwaye inqanaba lokususa uthuli ngama-99.9%. Inokususa ngokufanelekileyo iigesi eziyingozi ezinje nge-formaldehyde, i-benzene, i-ammonia, kunye namavumba ahlukeneyo, umsi kunye namavumba kwikhabhathi yemoto. Inendlela yokusebenza yomntu kunye noomatshini, ukubulala iintsholongwane ngaphandle kokuphela, kunye nongcoliseko.
3. Yongeza ii-oksijini zomoya ezingalunganga zokuphelisa ukudinwa kokuhamba.
Izigidi ezi-6 ze-ioni yeoksijini engalunganga, hlaziya umoya, yenza iiseli zisebenze, zonyuse ukhuseleko lomntu kunye nokuphelisa ukudinwa kokuhamba.
4. Ukucocwa komoya, ukubola kweegesi eziyingozi, ukugcinwa simahla kwaye akukho zixhobo zisetyenziswayo.
Kufakwe ngaphakathi kwe-grille ye-air conditioner, ubungakanani obuncinci abuhlali kwisithuba esongeziweyo, ngokuphendula kwetyathanga ukubola ngamandla igesi engcolileyo kwikhabhathi, ukuphelisa i-PM2.5, PM10 amasuntswana amisiweyo, gcina imeko yomoya kwimoto intsha kwaye isempilweni, akukho izinto ezisetyenziswayo ngexesha lokusetyenziswa, ukugcinwa simahla.
5. Esweni Remote, isilumkiso ukhuseleko, ulawulo ezikrelekrele.
Inokudityaniswa kumgca we-CAN kuyo yonke imoto, kwaye idatha yoluvo lwenqanaba lomoya inokujongwa ngexesha lokwenyani kwideshibhodi, kwaye isilumkiso sokutshintsha kunye nesilumkiso sokhuseleko sexesha lokwenyani semowudi yokusebenza yomcoci inokufezekiswa ngokwe umgangatho womoya; iwindow yokubuya inomboniso wayo ozimeleyo (bonisa uxinzelelo lwe-PM2.5 yamasuntswana, ubushushu, ukufuma kunye nesalathiso somgangatho womoya, ngokuzithandela), ivumela abagibeli ukuba baqonde imeko yobume bengcoliseko lobume besithuthi ngomboniso, okwenza imveliso ibe kwinqanaba eliphezulu kwaye iyasebenza ngembonakalo.
6. Ukusebenza okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, impembelelo encinci ekusebenziseni amandla esithuthi okanye kuhambo lokuhamba ngenqanawa.
Imowudi "yokwahlulahlula okunamandla" iqinisekisa ukusebenza ngokucoceka okuhlala ixesha elide kunye nokuzinzileyo, umthamo wokubamba uthuli uphindaphindwe kaninzi kunecebo lokucoca ulwelo; Ukutshatiswa nenkqubo yokuhambisa umbane yesithuthi sabakhweli, ukusetyenziswa kwamandla kwemodyuli yokucoca iintsholongwane yebhasi yeemitha ezili-12 yi-10W kuphela, ikhuselekile kwaye igcina amandla, ilungele Ukuxhotyiswa ngeebhasi eziqhelekileyo nezombane.
Uvavanyo loMcoci womoya
1 Ireyithi yokususa（1h） 99.9%
2 Isilinganiselo sokususa i-formaldehyde （1h） 90.4%
3 Inqanaba lokususa i-Toluene（1h） 91.4%
4 Ireyithi yokususa（1h） 92.2%
5 Ixabiso lokususa iXylene（1h） 93.0%
Ukhuphiswano oluphambili lwe-SONGZ yoMcoci woMoya
Ukucoca umoya kwi-SONGZ
Umsebenzi ohlambulukileyo wokuhlanjululwa
Ngaba ifuna ukungena komoya? Umoya wokungenisa umoya ngabalandeli Akukho moya
Indlela yokucoca umoya 1. Inkqubo ye-ion yokucoca umoyaImodyuli ye-ozone eyandisiweyo (ngokuzithandela)3.Ukususwa kothuli oluhlanganisiweyo
4. Isihluzi esidityanisiweyo sefotocatalyst
5. Ukuhlanganiswa kwenzalo kwe-UV
1. Ukuvalwa kwesibane kwesithuthi se-UV2. Ukutshiza ngesisombululo sokubulala iintsholongwane
Ukhuphiswano olungundoqo 1. Ukudityaniswa ngokubanzi, ubungakanani obuncinci, zimbalwa kakhulu iinguqu kwisithuthi
2.Ungazisusa ngokufanelekileyo zonke iintlobo zebhaktheriya, ii-virus, uthuli kunye neegesi eziyingozi
3. Iindleko ezipheleleyo zomcoci ziphantsi. Ukuba ufuna ukufaka imodyuli ye-ozone eyandisiweyo, kuya kufuneka wongeze iindleko ezingaphezulu kwe-100 RMB.
4. Umsebenzi wokucoca umoya unokuvulwa xa kuthwala abakhweli. Isicoci somoya ngokwaso siza kuvelisa isixa esincinci se-O3 (malunga ne-0.02ppm, ngaphakathi kuluhlu olukhuselekileyo) ukufezekisa ixesha lokucoca inzalo.
5. Xa i-anti-virus ifuneka kuyo yonke imoto, ngaphambi kokuba isithuthi sivuliwe okanye xa kungekho mntu emotweni, indlela yokuphucula i-ozone ivuliwe, kwaye iya kuyeka ngokuzenzekelayo emva kwemizuzu eyi-15, esebenza kakuhle nokonga umbane.
6. Xa iindlela zokupholisa, zokufudumeza kunye nokungenisa umoya zingakhanyiswanga, ifeni yenkqubo yoxinzelelo yenzalo iqala ngokuzenzekelayo imizuzu emi-5 kwaye ime imizuzu engama-20. 1. Utshintsho olukhulu kwisithuthi sonke, kuyimfuneko ukufakela izibane ezongezelelweyo ze-ultraviolet kwisithuthi, kwaye iseti yonke yenkqubo yokutshiza amanzi ngentsholongwane kufuneka ifakwe. Iprojekthi yokulungisa inkulu kwaye iindleko ziphezulu.
2. Iintsholongwane kunye neentsholongwane zinokucocwa, kodwa akukho lunyango lulungileyo lothuli kunye neegesi eziyityhefu.
3. Ukucocwa komoya kunye nokubulala iintsholongwane akuvumelekanga xa kuthwelwe abakhweli. Ukuba wenze nasemva kokubulala iintsholongwane, kufuneka utshintshiselwano lomoya, kwaye oku kusebenza kungaphantsi.
Amatyala okuSebenza kweNkqubo yokuCoca uMoya kwi-SONGZ
Okwangoku, inikezelwe kwiibhetshi kwiimodeli ezikumgangatho ophezulu wee-OEMs ezinje ngeXiamen Jinlong kunye neZhengzhou Yutong.
Siyathemba ukusebenza kunye nani ukuphucula okusingqongileyo ngexesha lokuhamba kwabantu kunye nokuphucula umgangatho womoya ngaphakathi kwesithuthi!
Egqithileyo Isilawuli soMoya seBhasi kwiBhasi eyiDecker
Okulandelayo: Isixhobo soMoya kwiMoto yabahambi
Umatshini wokupholisa umoya ngebhasi
isixhobo sokupholisa umoya seminibhasi
Isixhobo soMoya esiZenzekelayo
isixhobo sokupholisa esibuyiswe ngasemva
Isilawuli soMoya seBhasi kwiBhasi eyiDecker kabini
I-Double Decker ibhasi A / C.
Umqhubi womoya weBhasi ezimbini eDekker